အရကျဖွတျပွီး ၄ ပတျကွာရငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘာတှဖွေဈလာမလဲ ?
HomeKnowledgeအရကျဖွတျပွီး ၄ ပတျကွာရငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘာတှဖွေဈလာမလဲ ?
သာမနျဝငျငှရှေိတဲ့လူတဈယောကျက တဈနှဈကို အရကျ ၉.၅ လီတာ သောကျပါတယျ။ ၉.၅ လီတာသောကျတယျဆိုတာ အရကျစှဲနတေဲ့သူ မဟုတျပါဘူး။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့တှတေု့နျး နညျးနညျးပါးပါး သောကျတာဖွဈပါတယျ။ နညျးနညျးသောကျလိုကျ၊ တဈပတျလောကျမသောကျပဲ နလေိုကျလညျး ဖွဈခငျြဖွဈပါလိမျ့မယျ။
- အစာစားခငျြစိတျ မွငျ့တကျလာပါတယျ။ တကယျတမျးတော့ အရကျသောကျရငျ ပိုစားဖွဈလာကွပါတယျ။ အရကျအစား သဈသီးဖြျောရညျလေးတှေ သောကျပေးတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။
- ခြိုတဲ့အစားအစာတှကေို စားခငျြစိတျ ဖွဈပျေါလာစပေါတယျ။ အနညျးစုကတော့ အခြိုစားခငျြစိတျ မရှိကွတော့ပါဘူး။ ဆီးခြိုရောဂါရှိတဲ့သူ ဆိုရငျတော့ အခြိုစားခငျြစိတျက အန်တရာယျမြားပါတယျ။
- အရကျဖွတျပွီးရငျ အိပျပြျောဖို့ ခကျခဲလာမှာပါ။ အိပျယာမဝငျခငျ အရကျသောကျတတျသူဆိုရငျ ပိုပွီးတော့ ခကျခဲပါတယျ။ အရကျဖွတျဖွတျခငျြး ဆိုရငျတော့ ညမှာအိမျမကျဆိုးတှေ မကျလာပါလိမျ့မယျ။
- အခြို့သူတှကေ ခေါငျးကိုကျတတျပါတယျ။ အသညျးလညျး ထိခိုကျနိုငျပွီး သှေးလညျးတိုးနိုငျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျကလညျး နာကငျြကိုကျခဲနတေတျပါတယျ။
အရကျဖွတျပွီး ၂ ပတျအကွာ
- အရကျဖွတျပွီး နှဈပတျကွာရငျ အသညျးကပွနျကောငျးလာပါတယျ။ အရကျကို နစေ့ဉျသောကျရငျ အသညျးဆဲလျတှကေ သသှေားပွီးအသညျးမှာ အမာရှတျတှေ ပျေါလာပါတယျ။ အသညျးက ပွနျကောငျးလာနိုငျပမေယျ့ အခြိနျကွာပါတယျ။ အရကျ နညျးနညျးသောကျရငျ အသညျးပွနျကောငျးတာ မွနျပါတယျ။
- နောကျတဈခုကတော့ အသားအရေ လှလာပါတယျ။ အရကျက အရပွေားဆီသှားတဲ့ အောကျဆီဂငျြကို နှောငျ့ယှကျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အရကျသောကျရငျ အသားအရခွေောကျပွီး အစကျအပွောကျတှေ၊ အရေးအကွောငျးတှေ စောစောစီးစီး ပျေါလာပါတယျ။
- အစာခမြှေုက တိုးတကျလာပါတယျ။ အရကျဖွတျပွီး နှဈပတျအကွာမှာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့တှပွေီ့း သောကျခငျြစိတျကို ထိနျးဖို့အတျောခကျခဲပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အတှငျးစိတျခိုငျမာဖို့ လိုအပျပါတယျ။
အရကျဖွတျပွီး ၃ ပတျ အကွာ
- အရကျဖွတျပွီး ၃ ပတျ အကွာမှာ သိသာလာတာကတော့ မကျြကှငျးညိုတာ ပြောကျသှားတာပါပဲ။ ဆီးလမျးကွောငျးစနဈက ပုံမှနျအတိုငျး ပွနျဖွဈသှားလို့ပါ။
- မနကျခငျးမှာ နိုးထရ လှယျကူလာပါတယျ။ အိပျရေးဝပွီး လနျးဆနျးလာစပေါတယျ။
- အရကျသောကျခွငျးက တံတှေးထုတျလုပျမှုကို ကဆြငျးစပွေီး သှားကို ထိခိုကျစပေါတယျ။ အရကျဖွတျလိုကျပွီဆိုရငျ သှားပေါကျဖွဈခွငျးကို ကငျးစပွေီး သှားအပျေါယံကွှသှေားတှေ ခိုငျမာလာပါတယျ။
အရကျဖွတျပွီး ၄ ပတျ အကွာ
- အဝလှနျသူဆိုရငျ ကိုယျအလေးခြိနျ ကသြှားပါတယျ။ ပမျြးမြှအားဖွငျ့ တဈလကို ၆ပေါငျကနေ ၈ ပေါငျအထိ ကသြှားပါတယျ။ အရကျသောကျာတာ မကွာသေးဘူးဆိုရငျ ကိုယျအလေးခြိနျ ကတြာပိုမွနျပါတယျ။
- အရကျက သှေးတိုးစပေါတယျ။ အရကျသောကျတာကွာလာရငျ နှလုံးသှေးကွောနဲ့ ဆိုငျတဲ့ရောဂါတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
- အသားအရကေ ပိုကွညျလငျလာပါတယျ။ ဝကျခွံတှလေညျးပြောကျသှားပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ ရဓောတျက မြှတာလာပွီး သှေးလညျပတျမှုလညျး ကောငျးလာပါတယျ။ မကျြနှာက လနျးဆနျးလာပွီး အစကျအပြောကျတှလေညျး မရှိတော့ပါဘူး။
- စိတျတှလေညျး ကွညျလငျလာပွီး အလုပျတှလေညျး ထိထိရောကျရောကျ လုပျလာနိုငျပါတယျ။ အရကျသောကျရငျ ဦးနှောကျဆဲလျသနျးပေါငျးမြားစှာကို သစေပေါတယျ။
အရက်ဖြတ်ပြီး ၄ ပတ်ကြာရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ?
သာမန်ဝင်ငွေရှိတဲ့လူတစ်ယောက်က တစ်နှစ်ကို အရက်၉.၅ လီတာ သောက်ပါတယ်။ ၉.၅ လီတာသောက်တယ်ဆိုတာ အရက်စွဲနေတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တုန်း နည်းနည်းပါးပါး သောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းနည်းသောက်လိုက်၊ တစ်ပတ်လောက်မသောက်ပဲ နေလိုက်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
- အစာစားချင်စိတ် မြင့်တက်လာပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အရက်သောက်ရင် ပိုစားဖြစ်လာကြပါတယ်။ အရက်အစား သစ်သီးဖျော်ရည်လေးတွေ သောက်ပေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
- ချိုတဲ့အစားအစာတွေကို စားချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ အနည်းစုကတော့ အချိုစားချင်စိတ် မရှိကြတော့ပါဘူး။ ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့သူ ဆိုရင်တော့ အချိုစားချင်စိတ်က အန္တရာယ်များပါတယ်။
- အရက်ဖြတ်ပြီးရင် အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲလာမှာပါ။ အိပ်ယာမဝင်ခင် အရက်သောက်တတ်သူဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ အရက်ဖြတ်ဖြတ်ချင်း ဆိုရင်တော့ ညမှာအိမ်မက်ဆိုးတွေ မက်လာပါလိမ့်မယ်။
- အချို့သူတွေက ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ အသည်းလည်း ထိခိုက်နိုင်ပြီး သွေးလည်းတိုးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း နာကျင်ကိုက်ခဲနေတတ်ပါတယ်။
အရက်ဖြတ်ပြီး ၂ ပတ်အကြာ
- အရက်ဖြတ်ပြီး နှစ်ပတ်ကြာရင် အသည်းကပြန်ကောင်းလာပါတယ်။ အရက်ကို နေ့စဉ်သောက်ရင် အသည်းဆဲလ်တွေက သေသွားပြီးအသည်းမှာ အမာရွတ်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ အသည်းက ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပေမယ့် အချိန်ကြာပါတယ်။ အရက် နည်းနည်းသောက်ရင် အသည်းပြန်ကောင်းတာ မြန်ပါတယ်။
- နောက်တစ်ခုကတော့ အသားအရေ လှလာပါတယ်။ အရက်က အရေပြားဆီသွားတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကို နှောင့်ယှက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အရက်သောက်ရင် အသားအရေခြောက်ပြီး အစက်အပြောက်တွေ၊ အရေးအကြောင်းတွေ စောစောစီးစီး ပေါ်လာပါတယ်။
- အစာချေမှုက တိုးတက်လာပါတယ်။ အရက်ဖြတ်ပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီး သောက်ချင်စိတ်ကို ထိန်းဖို့အတော်ခက်ခဲပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အတွင်းစိတ်ခိုင်မာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အရက်ဖြတ်ပြီး ၃ ပတ် အကြာ
- အရက်ဖြတ်ပြီး ၃ ပတ် အကြာမှာ သိသာလာတာကတော့ မျက်ကွင်းညိုတာ ပျောက်သွားတာပါပဲ။ ဆီးလမ်းကြောင်းစနစ်က ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားလို့ပါ။
- မနက်ခင်းမှာ နိုးထရ လွယ်ကူလာပါတယ်။ အိပ်ရေးဝပြီး လန်းဆန်းလာစေပါတယ်။
- အရက်သောက်ခြင်းက တံတွေးထုတ်လုပ်မှုကို ကျဆင်းစေပြီး သွားကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ အရက်ဖြတ်လိုက်ပြီဆိုရင် သွားပေါက်ဖြစ်ခြင်းကို ကင်းစေပြီး သွားအပေါ်ယံကြွေသွားတွေ ခိုင်မာလာပါတယ်။
အရက်ဖြတ်ပြီး ၄ ပတ် အကြာ
- အဝလွန်သူဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်လကို ၆ပေါင်ကနေ ၈ ပေါင်အထိ ကျသွားပါတယ်။ အရက်သောက်ာတာ မကြာသေးဘူးဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန် ကျတာပိုမြန်ပါတယ်။
- အရက်က သွေးတိုးစေပါတယ်။ အရက်သောက်တာကြာလာရင် နှလုံးသွေးကြောနဲ့ ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
- အသားအရေက ပိုကြည်လင်လာပါတယ်။ ဝက်ခြံတွေလည်းပျောက်သွားပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ်က မျှတာလာပြီး သွေးလည်ပတ်မှုလည်း ကောင်းလာပါတယ်။ မျက်နှာက လန်းဆန်းလာပြီး အစက်အပျောက်တွေလည်း မရှိတော့ပါဘူး။
- စိတ်တွေလည်း ကြည်လင်လာပြီး အလုပ်တွေလည်း ထိထိရောက်ရောက် လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ အရက်သောက်ရင် ဦးနှောက်ဆဲလ်သန်းပေါင်းများစွာကို သေစေပါတယ်။